नेपालको राष्ट्रिय दैनिक, Online News and articles from Kantipur Daily. - कान्तिपुर समाचार
विप्लबजत्तिकै ‘खतरनाक’ मदिरा
कालिकोटमा निर्वाचन सुरक्षा
जनक नेपाल र तुलाराम पाण्डे, मंसिर ९, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशिलता आंकलन भइरहँदा पटकपटक जिल्ला सुरक्षा समितिका बैठकहरु बसे । ति बैठकमा चुनौतिहरुको समग्र विश्लेषण गरिए । अन्तत: कालिकोटको निर्वाचन सुरक्षामा नेकपा विप्लब समूह जत्तिकै मदिरा मुख्य चुनौति रहेको अधिकारीहरुले ठम्याएका छन् ।
रुकुम जिप दुर्घटना : विवाह गरेको तीन दिनमै प्रहरी दम्पतीको मृत्यु
भलिबलका राष्ट्रिय रेफ्री जनक शाह र एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु
यही मंसिर ६ गते वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षकद्धय नवीन श्रेष्ठ र अनिता प्रधान ।
हरि गौतम, रुकुम (पश्चिम), मंसिर ९, २०७४
सिस्ने गाउँपालिका-६, का २९ वर्षीय नवीन श्रेष्ठ र इटहरी उपमहानगरपालिका-१७ बालग्रामकी अनिता प्रधानको पेसा एउटै, नेपाल प्रहरी । दुवैको दर्जा पनि उही प्रहरी निरीक्षक । नवीन ६ नम्बर प्रदेशको सुर्खेतमा कार्यरत थिए भने अनिता प्रदेश २ को रौतहटमा कार्यरत थिइन् ।
के पाए नि पाख्रिन दाइले ?
सङ्गीत श्रोता, मंसिर ९, २०७४
अहिलेका टिनेजरहरूले उनका गीतको ‘कभर सङ’ गाएनन् । सामाजिक सञ्जालमा उनका दैनिकीको ट्रेन्डिङ चलेन । न सहरका खुला चोकमा उनका महँगा कन्सर्टहरू भए, न रेडियो–टेलिभिजनमै उनको गीत दोहोरिई–दोहोरिई बजे । पूरा पढ्नुहोस्
अखण्ड भण्डारी, सन्तोष सिंह, भूषण यादव, मंसिर ९, २०७४
निर्वाचनमा जसरी पनि जित्ने अभियानमा रहेका उम्मेदवारले दिनकै ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेका छन् । आक्रामक रूपले तडकभडक र तामझामसाथ भइरहेको खर्चका तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम झिकिएको भने पाइएको छैन । पूरा पढ्नुहोस्
सीटीईभीटी सम्बन्धन : आयोगको ‘असहमति पत्र’ नै गायब
मकर श्रेष्ठ, मंसिर ९, २०७४
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत ‘आर्थिक चलखेल’ गरेर निजी प्राविधिक शिक्षालयमा विषय थपको सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । उनी अध्यक्ष रहेको सीटीईभीटी परिषद्को असोज २२ मा बसेको १४७ औं बैठकले २५ कलेजलाई ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
निर्वाचनबारे छिमेकी र मित्र मुलुक : ‘निर्वाचनपछि स्थायित्व र विकास’
चन्द्रशेखर अधिकारी, मंसिर ९, २०७४
छिमेकी तथा अन्य मित्र मुलुकले संविधान कार्यान्वयनका लागि कोसेढुंगाका रूपमा रहेको संघ र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचन सफलताको शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सफल हुने र संविधान कार्यान्वयन हुँदै नेपाल विकासको पाइलामा अघि बढ्नेमा ढुक्क रहेको बताएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अनुगमनका लागि डोल्पा
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर ९, २०७४
निर्वाचनको मतदानका लागि १ दिन मात्र बाँकी रहेको बेला निर्वाचन आयोग नेपालका प्रमुख आयुक्त निर्वाचन अनुगमनका लागि डोल्पा पुगेका छन् ।
सुरक्षामा महिला म्यादी
शिव पुरी, मंसिर ९, २०७४
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको सुरक्षामा महिला म्यादी प्रहरी पनि खटाइने भएको छ । अघिल्लो चुनावमा अब्बल बनेर काम गरेकाले त्यही अनुसार सुरक्षाको जिम्मा दिन लागिएको हो । जिल्ला प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षाका लागि ५ सय २ महिला म्यादीमा भर्ना गरेको छ ।
मतदान केन्द्रमा सर्वदलीय बैठक बस्दै
मनोज बडु, मंसिर ९, २०७४
पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित सम्पन्न गर्न यहाँका सबै मतदान केन्द्रमा खटिएका निर्वाचन अधिकृत दलहरूसित छलफलमा व्यस्त छन् ।
निर्वाचनमा जसरी पनि जित्ने अभियानमा रहेका उम्मेदवारले दिनकै ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेका छन् । आक्रामक रूपले तडकभडक र तामझामसाथ भइरहेको खर्चका तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम झिकिएको भने पाइएको छैन ।
छिमेकी तथा अन्य मित्र मुलुकले संविधान कार्यान्वयनका लागि कोसेढुंगाका रूपमा रहेको संघ र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचन सफलताको शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सफल हुने र संविधान कार्यान्वयन हुँदै नेपाल विकासको पाइलामा अघि बढ्नेमा ढुक्क रहेको बताएका छन् ।
कर्मचारीलाई पानीकै पिरलो
टीकाप्रसाद भट्ट, मंसिर ८, २०७४
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञप्रसाद शर्मा बिहीबार साँझ निर्वाचन कर्मचारीसँगै भलुवाजोरको कालिका मावि केन्द्र पुगे । निर्वाचन सामग्री बोकेर थकित उनीहरुले पिउन पानीसम्म पाएनन् । खानपिन र बास त परको कुरा ।
आचारस‌ंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री थापासँग स्पष्टीकरण माग
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर ८, २०७४
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताविपरीत 'मौन अवधि'मा आफ्नो पार्टीको पक्षमा मत मागेको भन्दै उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विद्या राई, मंसिर ८, २०७४
जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले अनुगमन गरेका छन् । निर्वाचनविरोधी तथा उम्मेदवार लक्षित गतिविधि भएपछि मतदान समयको मुखैमा आएर उनीहरुले अनुमगन गरेका हुन् । बिहीबार क्षेत्रीय र शुक्रबार केन्द्रीयस्तरको टोलीले अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिएर फर्केको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले बताए ।
नेपाली सेनाका नक्कली मेजर पक्राउ
नेपाली सेनाकै पोशाकमा रहेर मेजर हुँ भनेर धम्क्याउदैं हिडने काठमाण्डौं सुकेधारा निवासी ३१ वर्षीय रोशन प्रसाइलाई गजुरीस्थित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकोछ ।
धादिङका २ मतदान केन्द्रमा भेटिएको सकेट बम सेनाद्वारा निस्कृय
हरिहरसिंह राठौर, मंसिर ९, २०७४
राजधानीसँग जोडिएको धादिङको जीवनपुर कोरमाईलो डाँडास्थित मतदान केन्द्रमा राखिएको बम नेपाली सेनाले शनिबार बिहान निस्कृय तुल्याएको छ । तत्कालिन जीवनपुर गाविस भवनमा हाल धुनीवेसी नगरपालिका—५ को वडा कार्यालय स्थापना गरिएकोछ ।
विप्लवका कार्यकर्ताद्वारा वडाध्यक्षको अपहरण
कांग्रेस उम्मेदवार लक्षित गरेर बम विस्फोट
कांग्रेस र वाम गठबन्धनका कार्यकर्ताबीच झडप
रेडियोलोजीमा जनशक्ति र उपकरण अभाव
‘कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरियो’
प्युठानका बाबुछोरीले भोजपुरमा जिते अल्ट्रारेस
विद्या राई, मंसिर ४, २०७४
आचारस‌ंहिताविपरीत झुन्ड्याइएका तुल, ब्यानर हटाइए
अवधेशकुमार झा, कार्तिक ३०, २०७४
नेतृत्व फेरिए, अबस्था फेरिएन
विद्या राई, कार्तिक २९, २०७४
सडक खाल्डोका कारण सानेपा हाईटमा ट्रिपर दुर्घटना
कान्तिपुर संवाददाता , कार्तिक २६, २०७४
अध्यक्षात्मक प्रणाली झनै खतरानाक
साउदीमा अलपत्र कामदारका आफन्त आक्रोशित
कान्तिपुर संवाददाता , कार्तिक २४, २०७४
थप भिडियो रिपोर्ट
संक्रमणकालीन संयन्त्रको औचित्यगोविन्द शर्मा ‘बन्दी’
गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’, मंसिर ९, २०७४
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको अन्वेषण गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूको कार्यकाल सकिन करिब २ महिनामात्र बाँकी छ । पूरा पढ्नुहोस्
बालबिज्याइँ कानुनको फितलो कार्यान्वयन
उषा पोखरेल, अजय बुढाथोकीमंसिर ९, २०७४
बालबिज्याइँ सम्बन्धी विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व बालबालिकाबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा १ ले बालबालिका सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष मुनिका प्रत्येक मानवलाई सम्झनुपर्छ भनेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
विमल निभा, मंसिर ९, २०७४
‘न मस्कार हनुमानजी ।’‘जय श्रीराम ।’ मेरो अभिवादन यसरी उत्तरित भयो । त्यसपछि मैले पनि सहज औपचारिकतावश भन्नुपर्ने भयो, ‘जय श्रीराम ।’ पूरा पढ्नुहोस्
नेपाली विकासको सर्त : जलस्रोतको सदुपयोग
अलाइना बी. टेपलेट्ज, मंसिर ८, २०७४
नेपालका सडकमा शान्त, सफा र प्रभावकारी विद्युतीय सवारी साधनमात्र देखिन्छन् । हावा स्वच्छ छ र हिमालको मनोरम दृश्य छेक्ने कुनै धुवाँ–तुवाँलो छैन । सिंचाइको राम्रो सुविधा भएको हुँदा किसानहरूलाई पानीको दु:ख छैन र उब्जनी बढेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
मौन अवधिको मान
सम्पादकीय, मंसिर ८, २०७४
पहिलो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बिहीबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । यो मौन अवधि मतदानका दिन मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म जारी रहनेछ । पूरा पढ्नुहोस्
ट्रम्पको एसिया नीति
कमलदेव भट्टराई, मंसिर ८, २०७४
एक वर्ष अगाडि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा उनले अपनाउने परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा सर्वत्र अनिश्चय थियो । राष्ट्रपति भए लगत्तै उनले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप सम्झौताबाट हात झिकेर ओबामा प्रशासनको भन्दा भिन्न नीति लिने संकेत दिए । पूरा पढ्नुहोस्
अन्योलमा जनजाति संस्थाहरू
गणेश राई, मंसिर ८, २०७४
सबैले भन्ने र बुझ्ने शब्द ‘उत्तम नीति नै राजनीति’ हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही लागू हुन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म राज्यसत्ता एकल थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सामाजिक संघ/संस्था गठन गरेर संगठित हुनपाउने, राजनीतिक दल गठन गर्न पाउने, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेपछि नेपाली समाज नयाँ ढंगले अघि बढेको हो । पूरा पढ्नुहोस्
संघीय अभ्यासको प्रारम्भिक यात्रा
चन्द्रकिशोर, मंसिर ७, २०७४
विकास र परिवर्तन लामो समयदेखि मुद्दा नै हुनसकेको थिएन । तर यसपटक स्थिति मधेससहित अन्य भूगोलमा फेरिएको छ । फेरिएको स्थिति पनि त्यति उत्साहजनक छैन । पूरा पढ्नुहोस्
गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’
अजय बुढाथोकी, अजय बुढाथोकी,
अलाइना बी. टेपलेट्ज
अष्ट्रेलियाको अध्यागमन नियम अझ कडा हुँदै
नारायण खड्का, मंसिर ९, २०७४
अष्ट्रेलियाले आफ्नो अध्यागमन नियमलाई अझ कडा बनाएको छ । पछिल्लो समयमा आप्रवासी नियमप्रति कठोर बन्दै गएको अष्ट्रेलियाले मुख्य रुपमा अस्थायी भिषाको पहिलेको नियमलाई अझ कडा रुपमा परिमार्जन गरेको हो ।
भूपू गोर्खाका सन्तानलाई बेलायत आउन अदालतको भर
भूपू गोर्खाका बयस्क सन्तान कानुनी लडाइँमार्फत आवासीय अधिकार लिएर बेलायत आउने क्रम बढेको छ । बेलायत सरकारले सजिलै भिसा दिन नमाने पनि अदालतले भूपू गोर्खाका बयस्क सन्तानको पक्षमा फैसला गरिरहेको गोर्खाहरुले बताएका छन् ।
दलाई लामाको विवादास्पद अभिव्यक्तिको बेलायतबाट विरोध
आध्यात्मिक नेता दलाई लामाले भारतमा हालै दिएको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिको बेलायतवासी नेपालीले पनि विरोध गरेका छन् । बुद्ध फाउन्डेशन युकेले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दलाई लामाले ‘गौतम बुद्ध भारतीय हुन्’भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा भर्त्सना गर्दै लामालाई आममाफी माग्न माग गरेको छ ।
कतारले भन्यो- ‘आवासीय कार्ड बनाउने प्रक्रियाको शुल्क कामदारले तिर्नुपर्दैन’
होम कार्की , मंसिर ७, २०७४
कतारले आवासीय अनुमति कार्ड (कतारी परिचयपत्र) बनाउने प्रक्रियामा लाग्ने खर्च कामदारबाट नलिने प्रस्ट पारेको छ । हाल आवासीय अनुमति कार्डको लागि एउटा कम्पनीको प्रति कामदार कम्तीमा १५ सय रियाल झन्डै ४५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
कतारमा न्यूनतम तलब ९ सय रियाल नै
होम कार्की, मंसिर ६, २०७४
कतारले न्यूनतम तलब ७ सय ५० रियाल तोके पनि नेपाल सरकारले पुरानो निर्णयअनुसार ९ सय रियाललाई नै यथावत् राखेको छ । साताअघि कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले अस्थायी रूपमा विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब ७ सय ५० रियाल (करिब २१ हजार रुपैयाँ) तोकेको थियो ।
युएईमा दोश्रो म्युजिक अवार्ड हुँदै
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर ५, २०७४
दोश्रो नेपाली म्युजिक भिडियो अवार्ड युनाइटेड अरब ईमिरेट्स (युएई) को अबुधाबीमा हुने भएको छ ।
अक्सफाम ट्रेल वल्करमा नेपाली निरन्तरता
किसन राई, मंसिर ४, २०७४
परम्परालाई निरन्तरता दिंदै अक्सफाम ट्रेल वल्कर २०१७ मा नेपाली खेलाडी विजयी भएका छन् । प्रतियोगिताका ३६ संस्करणका पछिल्ला पाँचमा निरन्तर र अधिकांशमा नेपालीले विजय प्राप्त गरेका छ ।
३९ साताको कठिन प्रशिक्षणपछि ग्य्राजुएट भए ब्रिटिस गोर्खा
नवीन पोखरेल, मंसिर १, २०७४
बेलायतको क्याट्रिकस्थित इन्फेन्ट्री ट्रेनिङ सेन्टर बिहीबार गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारले भरिभराउ थियो । बेलायती आर्मीमा भर्ती हुन नेपालबाट करिब पाँच हजार प्रतिस्पर्धीमध्येबाट छानिएर गत फेब्रुअरीमा बेलायत आएका २ सय ७० जना गोर्खाका लागि यो अर्को ऐतिहासिक क्षण हो । उनीहरु ३९ हप्ताको कठिन प्रशिक्षण पूरा गरी ‘ग्रयाजुएट’ भएका हुन् । हेल्स ब्यारेक परेड स्क्वायरमा उनीहरुको परेड निकै चाखलाग्दो थियो ।
ब्राजिली फुटबलर रोबिन्होलाई ९ वर्ष जेल सजाय
एक समय ब्राजिली राष्ट्रिय टोलीको आक्रमणका मुख्य खेलाडी रहिसकेका फरवार्ड रोबिन्होलाई इटालीको अदालतले ९ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । उनलाई सन् २०१३ मा इटालीको मिलानमा एक महिलालाई यौनहिंसा गरेको आरोपमा जेल सजाय सुनाइएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
झापाका दिलेन लोक्तान र छिरिङ गुरुङबाट बल खोस्ने प्रयासमा सुदूरपश्चिमका फिलिप तामाङ (बायाँ) । तस्बिर : पर्वत पोर्तेल/कान्तिपुर
मेची नेत्रालय काँकडभिट्टा गोल्डकप फुटबलमा शुक्रबार झापा ११ सुदूरपश्चिम ११ सँग टाइब्रेकरमा ५–४ ले स्तव्ध भयो । झापाको यो सिजनकै तेस्रो पराजय हो । पूरा पढ्नुहोस्
कसको स्थिति कस्तो ?
एएफपी, मंसिर ९, २०७४
यसपल्टको युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणमा अन्तिम एक चरणको खेलमात्र बाँकी छ । युरोपेली क्लब फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगितामा केही टिम यसअघि नै नकआउट चरण पुगिसकेका छन् भने कसैको भाग्य कोरिन अझै बाँकी छ । पूरा पढ्नुहोस्
दोस्रो दिनको खेलपछि क्रिजबाट फर्कंदै अस्ट्रेलियाली कप्तान स्टिभ स्मिथ र शन मार्श । तस्बिर : रोयटर्स
कप्तान स्टिभ स्मिथ अस्ट्ेरलियाली माथिल्लो क्रमको ब्याटिङ पतनपछि इंग्ल्यान्डविरुद्धको पहिलो टेस्टको दोस्रो दिन शुक्रबार टिमलाई उद्दार गर्ने अभियान छन् । घरेलु टिमको सबै भरोसा स्मिथमाथि छ । टिमले ४ विकेट गुमाएसकेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
सिटी म्याराथन रूपमा हुँदै आएको नेवा: च्यारिटी रनको छैटौं संस्करणको तयारी सुरु भएको छ । फागुन ५ मा हुने नेवा: च्यारिटीबारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तयारी सुरु गरिएको आयोजक धरान रनले जनाएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
डिफेन्डिङ च्याम्पियन करियर बिल्डिङ एकेडेमीले शुक्रबार सुरु १२ औं फेका कप अन्तरस्कुल छात्र फुटबलमा विजय पाएको छ । करियरले हाइल्यान्डलाई २–० ले हरायो । सविन कोइराला र जीवन लामाले गोल गरे । हाइल्यान्डका रविन खड्का म्यान अफ द म्याच भए । प्रतियोगितामा फेकामा आबद्ध विभिन्न २७ विद्यालयमध्ये २० टिमले भाग लिएका छन् । फाइनल मंसिर १६ मा हुनेछ । पूरा पढ्नुहोस्
टाइम्स कलेजले शुक्रबार प्रथम अल्फा बिटा अन्तरकलेज फुटसलको उपाधि जित्यो । शंखमूल फुटसलमा भएको फाइनलमा टाइम्सले आइडियल कलेजलाई टाइब्रेकरमा ५–४ ले हरायो । टाइम्सबाट विवेक गुरुङ, सन्तोष महत, अनिश कार्की, अनिल खड्का र आशिष सुनामले गोल गरे । पूरा पढ्नुहोस्
मिलान युरोपामा छनोट
इटालियन क्लब एसी मिलानले अस्ट्रिया वाइनलाई ५–१ ले पराजित गर्दै युरोपा लिगको दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको छ । क्रिस्टोफ मोन्सचेनको गोलले घरेलु टोली खेलमा पछाडि परे पनि राम्रो पुनरागमन गर्न सफल रह्यो । उसका लागि प्याट्रिक कुट्रोने र आन्द्रे सिल्भाले २–२ गोल गरे । अर्को एक गोल रिकार्डो रोड्रीग्वेजको नाममा रह्यो । पूरा पढ्नुहोस्
फूल बेचेर अर्बपति
दिनेश यादव, मंसिर ९, २०७४
पहिले बारमा काम गर्ने अमेरिकी उद्यमी जेम्स एफ म्याक्केनन फूलको व्यापारबाट अर्बपति बनेका छन् । जिम म्याक्केनन नामले समेत चर्चित यिनको जन्म ६६ वर्षअघि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारमा भएको हो । यिनका बुबा पेन्टिङ कन्ट्रयाक्टर थिए ।
बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै
बलराम बानियाँ, मंसिर ९, २०७४
सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लागतको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी निर्णय गरेको हो । सरकारले निर्माणको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
पूर्वी पहाडको ढोका खुल्यो
डम्बरसिं राई, कुम्भराज राई, मंसिर ९, २०७४
खोटाङ र ओखलढुंगा जोड्ने जयरामघाटस्थित दूधकोसी नदीको पक्की पुल शुक्रबार बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको छ । ठेक्का लागेको ८ वर्षपछि निर्माण पूरा भई पुल सञ्चालनमा आएको हो ।
धमाधम ६ लेनका सडक
श्यामसुन्दर शशि, मंसिर ९, २०७४
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रचार उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला ढल्केवर–जनकपुर ६ लेन सडक निर्माण तीव्र छ । २६ किलोमिटर सडक निर्माणमा करिब हजार कामदार कार्यरत छन् । अर्कोतर्फ यसै सडकको जनकपुर–जटही खण्डको कार्यप्रगति भने सुस्त छ ।
प्राधिकरणको बजेट ४३ अर्ब
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु वर्षमा ४३ अर्ब ५९ करोड खर्च गर्ने गरी शुक्रबार बजेट पारित गरेको छ । सम्भवत: सरकारी निकायमा सबैभन्दा ढिला गरी प्राधिकरणको बजेट पारित भएको हो ।
दूधकोसी पुल सञ्चालनपछि जोडिए पूर्वी पहाड
कुम्भराज राई, मंसिर ८, २०७४
खोटाङ र ओखलढुंगा जोड्ने जयरामघाटस्थित दूधकोसी नदीको पक्की पुल शुक्रबार बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको छ । ठेक्का लागेको आठ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको हो । हर्कपुर सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ईश्वर रिजालले पुलको अनौपचारिक उद्घाटन गरे ।
घट्न थाल्यो तरकारीको भाउ
राजु चौधरी, मंसिर ८, २०७४
दुई साताअघि अस्वाभाविक रूपमा बढेको तरकारीको भाउ घट्न थालेको छ । सहज आपूर्ति र बिचौलियाहरू निरुत्साहित हुँदा मूल्य घटेको हो ।
चमेलियाका लागि प्रसारण लाइन तयार
मनोज बडु, मंसिर ८, २०७४
शैल्यशिखर नगरपालिका १ बलाचमा रहेको ३० मेगावाट चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने बलाच–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालन भएको छ । बलाचदेखि कैलालीको अत्तरियासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइनको परीक्षण सम्पन्न भइसकेपछि चार्ज गर्न थालिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ ।
Tweets by @kantipurdaily
TIME | समयानुसार क्रमबद्ध लेखहरू
नेपाली सेनाका नक्कली मेजर पक्राउ - ०२:२२ PMब्राजिली फुटबलर रोबिन्होलाई ९ वर्ष जेल सजाय - ०२:१७ PMअष्ट्रेलियाको अध्यागमन नियम अझ कडा हुँदै - ०१:१३ PMधादिङका २ मतदान केन्द्रमा भेटिएको सकेट बम सेनाद्वारा निस्कृय - ०१:०२ PMविप्लवका कार्यकर्ताद्वारा वडाध्यक्षको अपहरण - १२:२६ PMअफरोड यात्रा [फोटोफिचर] - १२:१२ PMप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अनुगमनका लागि डोल्पा - ११:३३ AM
थप समाचार हेर्नको लागि kantipur.ekantipur.com/time
‘अब कुनै आन्दोलनमा जान्नँ’
तेस्रो मधेस आन्दोलनमा वीरगन्जको सीमावर्ती मैत्री पुलमा ६ महिनासम्म धर्ना दिनेमध्ये एक युवक थिए– १३ वर्षीय अजय गिरी । आफ्नो नाम पछाडि ‘क्रान्तिकारी’ झुन्ड्याएका उनी अहिले १५ वर्षका भए, बाराको कलैयास्थित एउटा होटलमा सहयोगीको काम गर्छन् ।
विनोद चौधरीसँग अन्तर्वार्ता : ‘परिवर्तन राजनीतिबाट मात्र सम्भव छ’कतारको नाकाबन्दीले नेपाली कामदार खासै प्रभावित छैनन् : राजदूत कोइराला‘चुनाव सार्नु देशलाई खाल्डामा हाल्नु हो’बन्दुक चलाउन भन्दा संसदीय अभ्यास गाह्रो: सभामुख
चुनावी चहलपहलबीच समुदायमा सौहार्दता
महानगर सीमा जोडिएको मोरङको कटहरीसँगै मझारे अनि भाथिगछमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मत माग्दै पहाडी समुदायका उम्मेदवारलाई मधेसी समुदायको घरदैलोमा पुग्नै समस्या थियो ।
६३ वर्षदेखि आरनमै‘सदन’ जस्तै नगरसभासीमामा सुरक्षा कडाइगाउँ फर्किए मतदाता
पैलो र दोस्रोमा गरेको गल्ती कदापि दोहोर्‍याम्दैनम् !... तेस्रो चरनको चुनापमा नयाँनयाँ गल्ती गरेर देखाइ दिन्छम् !
हिजोआज ‘भाइरल’ शब्द चल्तीमा छ । यही शब्द समातेर मानस राजले निकालेको गीत ‘भाइरल भइदियो...’ भाइरल नै त भएको छैन तर चर्चा ठूलो छ । पूरा पढ्नुहोस्
इजरायली निर्देशक भन्छन् - नेपाल साँच्चै अद्भुत छ
इजरायली अभिनेता/निर्देशक मेइर स्विसा पोखरामा बिहीबार आफ्नो स्वागतमा आयोजित समारोहमा । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा/कान्तिपुर
दीपक परियार, मंसिर ९, २०७४
प्रतिष्ठित ओस्कार अवार्डमा विदेशी भाषातर्फ सबैभन्दा धेरै फिल्म इजरायलबाट मनोनयनमा पर्छन् । हालसम्म ४० भन्दा बढी इजरायली फिल्मले ओस्कार मनोनयनमा परेका छन् । त्यही फिल्म उद्योगका कहलिएका अभिनेता/निर्देशक मेइर स्विसा डकुमेन्ट्री वृत्तचित्र नेपाल आइपुगेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
यति बेला हलहरूमा ‘जस्टिस लिग’ चलिरहेको छ । उक्त अमेरिकन सुपरहिरो फिल्ममा ब्याटम्यान, सुपरम्यान, वन्डर वुमेन, एक्वाम्यान, फ्ल्यास आदिलाई देख्न सकिन्छ । यो विधा निकै रोमाञ्चक मानिन्छ । हलिउडका कतिपय कलाकारले सुपरहिरो फिल्मबाटै ख्याति कमाएका छन् । तिनले लगाएका पूरा पढ्नुहोस्
निर्देशक सबिर श्रेष्ठले आफ्नो नयाँ फिल्म ‘बाँध मायाले’ मा नायक आर्यन अधिकारी र नायिका सृष्टि श्रेष्ठको अनस्क्रिन जोडी बाँधिदिएका छन् । यसै साता नवलपरासीबाट छायांकन थालिने बताइएको फिल्मलाई निर्देशक स्वयंले लेखेका हुन् । पूरा पढ्नुहोस्
अंग्रेजी नयाँ वर्षकै छेको पारेर पुस १४ गते रिलिज हुन लागेको नेपाली फिल्म ‘हयाप्पी न्यु इअर’ को बिहीबार ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । देवकुमार श्रेष्ठको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्ममा कुशल थापा, सन्ध्या केसी, पुकार गौतम, करण श्रेष्ठलगायतको अभिनय रहेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
‘रोमियो एन्ड मुना’ फागुनमा
सहरको युवक र गाउँले युवतीबीचको मायाप्रेमलाई दर्साउन खोजिएको फिल्म ‘रोमियो एन्ड मुना’ ले बिहीबार प्रदर्शन मिति निश्चित गरेको छ । नरेशकुमार केसी निर्देशित फिल्म फागुन ११ देखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने भएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
नेपाल आइडल अस्ट्रेलियामा
नारायण खड्का, मंसिर ८, २०७४
अस्ट्रेलियाका सबै सहरमा हुन लागेको सांस्कृतिक प्रस्तुतिका लागि नेपाल आइडललगायतका कलाकारहरू यहाँ आइपुगेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
बहसमा ढयाङ्ग्रो, खैंजडी र भजन
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर ७, २०७४
पछिल्लो समय झाँक्रीलाई मनोचिकित्सासँग जोडेर हेर्ने अवधारणा पनि पाइन्छ । नेपाली लोकबाजा संग्रहालय र सांस्कृतिक संस्थानले बुधबारदेखि राष्ट्रिय नाचघरमा सुरु गरेको सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय लोक संगीत फिल्म फेस्टिभलको पहिलो दिन झाँक्रीलाई लोकसंगीतसँग जोडेर चर्चा गरियो । पूरा पढ्नुहोस्
के हो ‘सडन कार्डियक अरेस्ट’ ?
अतुल मिश्र, मंसिर ९, २०७४
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका एक मात्र छोरा प्रकाशको अप्रत्याशित मृत्युपछि अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा उपयोग गरिने शब्द ‘सडन कार्डियक अरेस्ट (एससीए)’ गम्भीर गफगाफको विषय भएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
बालबालिकालाई प्रविधि वरदान कि श्राप ?क्लेप्टोमेनिया- चाेरी गर्ने बानी !तपाईंको बालबालिकामा कुपोषण त छैन?आलुमा छ औषधीय गुण
मेडिकल शिक्षामा बाम गठबन्धनको ‘राज्य कब्जा’
जीवन क्षेत्री, मंसिर ७, २०७४
एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन र एकताको घोषणा गर्दा देशको राजनीतिमा पर्न जाने दुई सकारात्मक परिणामहरु मेरो मनमा आएका थिए ।एक, बाँकी जे भए पनि यो राजनीतिक स्थिरतातिरको यात्रा थियो । दुई, काँग्रेस अहिले देउवाको नेतृत्वमा जसरी चलिरहेको छ, त्यसलाई एक चरण पाठ पढाउन पनि यस्तो तालमेल वा ध्रुवीकरण आवश्यक थियो । पूरा पढ्नुहोस्
चुनावी घोषणापत्र पुरा नगरे बेलायतमा राजनीतिक अवसान हुन्छ, नेपालमा नि ?बदलिएको राजनीति, नबदलिएका जनता हीरा म्याडम हीरा नै रहिछिन् सम्झनामा त्यो खैरेनीको जाम
जिम्बावेमा नयाँ राष्ट्रपति
जिम्बावेका नवनियुक्त राष्ट्रपति एमर्सन मनाङग्याग्वा राजधानी हरारेमा आयोजित समारोहमा शपथ ग्रहण गर्दै । तस्बिर : एपी
बीबीसी, मंसिर ९, २०७४
रबर्ट मुगाबेले राजीनामा दिएपछि रिक्त जिम्बावेको राष्ट्रपति पदमा एमर्सन मनाङग्याग्वाले शपथ लिएका छन् । उनले राजधानी हरारेको रंगशालामा ६० हजार जनतामाझ शुक्रबार शपथ लिएका हुन् । मनाङग्याग्वालाई प्रधानन्यायाधीश लुक मलाबाले शपथ गराएका हुन् । शपथ ग्रहणलगत्तै गरेको सम्बोधनमा मनाङग्याग्वाले ‘जिम्बावेप्रति इमानदार’ हुने बताए । उनले भने, ‘देशको पुनर्निर्माण गर्ने कार्य मेरो हातमा आएको छ ।’ पूरा पढ्नुहोस्
पाकिस्तानी इस्लामिक नेता रिहा
एजेन्सी, मंसिर ९, २०७४
पाकिस्तानी इस्लामिक नेता हाफिज सइद उच्च अदालतको आदेशपछि नजरबन्द मुक्त भएका छन् । उनीविरुद्ध अमेरिकाले एक करोड डलर टाउकाको मोल तोकेको छ । उनी गत जनवरीदेखि लाहोरस्थित घरमा नजरबन्दमा थिए । पूरा पढ्नुहोस्
थाइल्यान्डमा सवारी दुर्घटना, १३ को मृत्यु
थाइल्यान्डमा शुक्रबार भएको सवारी दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमध्ये १२ म्यान्मारका नागरिक र एक थाई चालक छन् । पूरा पढ्नुहोस्
इजिप्टको मस्जिदमा आक्रमण, २ सय ३५ मारिए
तस्बिर : बीबीसी
इजिप्टको उत्तरी प्रान्त सिनाईको एक मस्जिदमा शंकास्पद विद्रोहीले शुक्रबार गरेको आक्रमणमा २ सय ३५ जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । आक्रमणमा कम्तीमा १ सय घाइते भएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
लन्डनमा संघीयता बहस : प्रदेश २ को संरचना बाधक बन्न सक्ने
नवीन पोखरेल, मंसिर ८, २०७४
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा योजनाविद् पीताम्बर शर्माले प्रदेश २ को संरचना संघीय नेपालको समस्या बन्न सक्ने औंल्याएका छन् । बिहीबार बेलायत–नेपाल प्रज्ञा परिषद्द्वारा लन्डनमा आयोजित १५ औं वार्षिक कार्यक्रममा प्रवचन दिँदै उनले अरू प्रदेशमा विभिन्न जाति, जनजाति मिसिएर रहेको तर २ नम्बर प्रदेशमा ९० प्रतिशत मधेसी रहेकाले समस्या उत्पन्न हुन्न सक्ने बताए । पूरा पढ्नुहोस्
जिम्बावेमा मुकावे राजको अन्त्य, निर्वासनको दुई सातामै मनङ्गवा राष्ट्रपति
जिम्बावेमा ३७ बर्षे रवर्ट मुकावे शासन निरंकुशताको अन्त्य गर्दै नयाँ राष्ट्रपति इमर्सन मनङ्गवाले शुक्रबार सपथ लिएका छन् । उनी मुकावेले उपराष्ट्रपतिबाट अपदस्त गरेर निर्वासनमा पुगेको दुई साता पछि नै राष्ट्रपति बनेका हुन् । पूरा पढ्नुहोस्
बंगलादेश–म्यान्मार बैठक रोहिंग्या फिर्ता गर्ने सहमति
रोयटर्स, मंसिर ८, २०७४
बंगलादेश र म्यान्मारबीच रोहिंग्या शरणार्थीलाई दुई महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । बंगलादेश भागेका रोहिंग्या शरणार्थीलाई फिर्ता गर्न विश्वभरबाट माग भइरहेका बेला म्यान्मारकी नेतृ आङ सान सुकी र बंगलादेशका विदेशमन्त्री एएच महमद अलिबीच म्यान्मारको न्यापितमा भएको बैठकमा उक्त सहमति भएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
बेलायतले चालकरहित कारलाई प्राथमिकता दिने
बेलायतले चालकरहित कार प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । बढ्दो प्रविधिलाई आत्मसात नगरे विश्व बजार प्रतिष्पर्धामा आफू पछि पर्न सक्ने चुनौतिबीच बेलायती अर्थमन्त्री फिलिम हयामण्डले सन् २०२१ भित्र चालकरहित कारको प्रविधि विकास गर्न दश करोड पाउण्ड विनियोजन गरेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
षडानन्द पुरस्कारहरू प्रदान
आबाल ब्रह्मचारी षडानन्दको १८३ औं जन्मजयन्ती पारेर उनैका नाममा स्थापित राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय गरी तीन पुरस्कार अर्पण गरिएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
‘जो नाच्छ ऊ बाँच्छ’ भयवाद तिलमती पुरस्कार गुरागाईंलाईमदनमोहन जोशी पुरस्कार शर्मालाईधुर्मुस–सुन्तलीलाई भैरव अर्याल
घर या कारको लक खोल्न ‘भाईबराइट’
दिनेश यादव, मंसिर ७, २०७४
घर या कारको चाभी कही बिर्सेको या हराएको अवस्थामा तपार्इंले अब चिन्ता लिनु पर्दैन । वैज्ञानिकहरुले यस्तो समस्याको समाधान निकालेका छन् । उनीहरुले कम लागतमा नयाा सुरक्षा प्रणाली विकसित गरेका छन् । यो प्रणाली औलाको कम्पन (फिंगर भाइब्रेसन) को आधारमा व्यक्तिलाई सही ढंगले सजिलै पहिचान गर्ने छ । पूरा पढ्नुहोस्
‘विच्याट’ ले फेसबुकलाई उछिन्योचुनावकाे मुखमा फेसबुकमा ‘फेक’ धन्दारंगिए सामाजिक सञ्जालअनलाइनमा गलत विज्ञापन गरे जरिवाना
थप सूचना प्रविधि
तन्दुरुस्ती सफलताको पहिलो सर्त
मधु शाही, कार्तिक २३, २०७४
बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीलाई फिटनेश गुरु मानिन्छ । खास गरी योगमार्फत शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न उनी जोड दिने गर्छिन् । तन्दुरुस्ती सफलताको पहिलो सर्त हुने उनी मान्छिन् । पूरा पढ्नुहोस्
कान्तिपुर संवाददाता , कार्तिक ८, २०७४
करिअर बनाउने बाटाहरू थुप्रै छन् । तर, मनले खाएको काम गर्नुको आनन्द बेग्लै हुन्छ । त्यसैमा नै लुकेको हुन्छ सन्तुष्टि । यतिखेर सिर्जनशील पेसाप्रति युवापुस्ता आकर्षित हुँदै छन् । सम्झना परियार फेसन डिजाइनिङमा सानैदेखि रुचि राख्ने गर्थिन् । मन छुने पहिरनका स्केच उनी कापीमा कोर्ने गर्थिन् । पूरा पढ्नुहोस्
“अल इन्डिया रेडियोमा गाउन थाल्दा पर्‍यो लभ”
मधु शाही, आश्विन १८, २०७४
डाइनिङ टेबलमा परिकार तयार छन् । घरको तल्लो तलामा आफ्नै सुरमा काम गरिरहेका पति (संगीतकार शिलाबहादुर मोक्तान) लाई गायिक कुन्ती मोक्तानले भान्सामा धेरैपटक बोलाइसकेकी छन् । शिलाबहादुरको आउने छाँट छैन । उनी आफ्नै सुरमा रमाइरहेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
बदलिँदै दरको मेनु
कान्तिपुर संवाददाता , भाद्र ८, २०७४
हरियो दुधौले मकै छोडाएर भाँडामा राख्ने । मजाले उम्लिएको दूधमा खीर पकाएजस्तै गरी त्यो मकै राख्ने । अनि निकै बेर उमाल्ने । जसरी खीर बनाइन्छ, उसैगरी आवश्यक सबै सामग्री राख्ने । पाकेपछि तयार हुन्छ— ‘मकै खीर’ । पूरा पढ्नुहोस्
‘मेरो दाह्री दुनियाँलाई किन भारी ?’
किरण पाण्डे, भाद्र ३, २०७४
पछिल्ला वर्षहरूमा दाह्रीका सोखिन तन्नेरीहरूको संख्या सहरमा बाक्लै देखिन थालेको छ । तर यिनीहरूले ऋषिमुनिजस्तै देखिन दाह्री पालेका होइनन् । पूरा पढ्नुहोस्
पौडेरै पुग्छन् दिनहुँ कार्यालय
एजेन्सीहरू, श्रावण २०, २०७४
ट्राफिक जामबाट आजित नहुने सायदै कोही होलान्? दिनहुँजसो सडकमा हुने जामले सर्वसाधारणको घण्टौं समय त्यत्तिकै खेर जाने गरेको छ। अझ उकुसमुकुस हुने गर्मी र माइक्रोमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ। पूरा पढ्नुहोस्
बुढीआमाको डिजिटल फड्को
-सुरज कुँवर, श्रावण १४, २०७४
झिसमिसे साँझपख टुप्लुक्क आँगनमा आइपुग्ने जेटीएलाई भुटेको मकै–भटमास खुवाउँदै करेसाबारी, पशुपालन आदिबारे गन्थन गर्ने बुढीआमालाई सुनेर नहुर्किने सायदै होलान्। पूरा पढ्नुहोस्
'भलिउड'मा चम्किएका चन्द्र
मनोज पौडेल, श्रावण १०, २०७४
५० भन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा द्वन्द्व निर्देशन गरिसकेका चल्तीका युवा द्वन्द्व निर्देशक चन्द्र पन्तलाई भलिउडको रमझमले तानेको छ । त्यसो त कलिउडका विराज भट्ट, निखिल उप्रेती, रजनी केसीलगायत धेरै कलाकारलाई भोजपुरी चलचित्रले नतानेको होइन । पूरा पढ्नुहोस्
विकास चिन्तनमा जेलिएको गाँठो चुनावी घोषणापत्र : साइन्स फिक्सन‘कीर्तिमानी’ कीर्तिनिधिसमृद्ध तर विपन्न
मेक्सिकोमा गरियो ‘मुर्कट्टा परेड’ (तस्बिरहरु)
राेयटर्स, कार्तिक ८, २०७४
दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिकोमा भएको ‘मुर्कट्टा परेड’मा सयौं मानिसको सहभागिता थियो । सयपत्री फुलले घेरिएर गरिएको परेड मृतकहरुको सम्मानमा गरिएको थियो । सयपत्री फुलले मृतकको आत्मालाई शान्ति प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
किन मनाइन्छ दिवाली ? मकवानपुरमा बाख्राका लागि ‘स्विमिङपुल’८४ वर्षे उमेरमा पनि कटुवालचीनद्वारा ‘विश्वकै अग्लो’ विद्युत खम्वाको निर्माण गर्दै
अफरोड यात्रा [फोटोफिचर]
-सुरज कुँवर, मंसिर ९, २०७४
मालपारिको माथिल्लो मुस्ताङ पहिलोपटक घुम्न उक्लिनेले प्राय: दिमागमा मध्यपहाडी भूगोलको चित्र बनाउँछन् । तर, हामी अधिकांशले कल्पना गरेजस्तै चित्र माथिल्लो मुस्ताङको भूगोलसँग ठ्याक्कै मेल खाइहाल्दैन । सुनिएको र कल्पना गरिएभन्दा यो अनौठो छ । अदभुत र अलौकिक भएकाले धेरैले यो थलोलाई स्वर्गको टुक्रा उपमा दिन्छन् । पूरा पढ्नुहोस्
दुलहा बनल श्रीराम हे...
श्यामसुन्दर शशि, मंसिर ८, २०७४
सांस्कृतिक सहर जनकपुरधामले यसै साता राम-सीता विवाह महोत्सव मनायो । सप्ताहव्यापी विवाह महोत्सवको मुख्य आयोजना (राम–सीताको विवाह) बिहीबार राति भएपनि रमझम भने एक साता अघि नै सुरु भएको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
पूर्वी नेपाल घुम्नका लागि ‘ट्रान्जिट’ पनि हो धरान । नेपालकै आधुनिक सहरका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएको धरान पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुको प्रवेशद्वार हो भने पहाड र तराईबीचको संगमस्थल पनि । यहाँको हावापानी बेग्लै किसिमको छ । पूरा पढ्नुहोस्
महिलाको काँधमा शव !
प्रताप रानामगर, मंसिर ८, २०७४
नेपाली समाजमा मृतक शवलाई पुरुषले मात्र बोक्ने चलन छ । तर यो चलनलाई तनहुँ दमौलीका महिलाहरुले तोडेका छन् । व्यास-७ चापघाटस्थित वेदव्यास जेष्ठ नागरिक आश्रममा आश्रय लिदै आएका ८१ वर्षीय मीनबहादुर बस्यालको शुक्रबार बिहान निधन भएपछि उनको शव महिलाले बोके । पूरा पढ्नुहोस्
लाजिम्पाटमा प्रकाश दाहालको श्रद्धाञ्जली सभा [तस्बिरहरु]
तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर, मंसिर ७, २०७४
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पुत्र दिवंगत साकार दाहाल ‘प्रकाश’को श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
यसरी हुँदैछ धादिङमा चुनाव तयारी [फोटोफिचर]
तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर, मंसिर ५, २०७४
मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावको तयारी पूरा भएको छ । चुनावका लागि मंगलबार १ हजार ९ सय २१ जना कर्मचारी खटाइएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
पेरिसडाँडामा प्रकाशलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली (फोटोहरु)
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर ३, २०७४
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश दाहालको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि माओवादी केन्द्र मुख्यालय पेरिसडाँडामा राखिएको छ । उनको आज बिहान निधन भएको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
शोकाकुल परिवार, स्तब्ध शुभचिन्तक
३७ वर्षीय दाहाललाई आज बिहान ५:५० मा उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो । लगत्तै उनलाई चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए । पूरा पढ्नुहोस्
तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर
के पाए नि पाख्रिन दाइले?
चराको संसारहसन र अलीसँग जंगमको संगमउदीयमान टिमको अनिश्चित बाटोपसलमा पुस्तक
लिंकडिनमा करियर एडभाइसह्वाट्सएपमा नयाँ फिचरस्टोरिज अब म्यासेन्जरमा पनियुगलको सेकेन्ड हाफ
बुइँगलको भूत ओभर एन्ड अन्डर थ्रोनेपालको विशेषताकिताब
कुबेतमा : के गर्ने ? के नगर्ने ?
म्यानपावरका निर्देशकलाई ओमनको राजदूत सिफारिसनेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै‘इन्डियन भैया भन्न कहाँ पाइन्छ.सात हजार घरेलु कामदार